Furgicide | Min Ma Haw Company Ltd
ခရမ်းချဉ်ပန်းစပွင့်သည့် အချိန်မှစ၍ ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်စေရန် ပွင့်သောပန်းတိုင်း သနေ အောင် အသီးတင်စေရန် ပန်းပွင့်ကြွေမူနည်းပြီး ပွင့်ညှာခိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကာလဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့်၊ သနေ အောင်ခြင်း၊ပန်းပွင့်ကြွေခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်- အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ခရမ်းချဉ်အထူးအားဆေးကို (၅)ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ပက်ဖျန်းပါ။
Read more about တာဘို(ခရမ်းချဉ်အထူးအားဆေး)
စတားလက် ၆၀ဒဗလျူ ပီ
သီးနှံမျိုးစုံတွင် ဆိုးရွားစွာကျရောက်ဖျက်စီးသော ဒေါင်းနှီးရွက်ခြောက်၊ ရေစိုနာ (လောင်မဲ၊ ပင်နာကျ)၊ ဖားဥမှို၊ ပင်ခြေပုတ်၊ အမြစ်ပုတ်၊ စပျစ်ရိုးညိုရောဂါ၊ ကွမ်း၊ ရိုးမဲဆစ်ပြုတ်ရောဂါ၊ စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ တို့ကို အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်နှိမ်နင်းနိုင်သော နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဖြစ်သည်။
BIG GUN 30SC
ဘစ်ဂန်း 30 အက်စ်စီ
သီးနှံမျိုးစုံတွင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးသော သီးလုံးဖေါက်ပိုး၊ ငမြှောင်တောင်၊ ၀ါဂွမ်းနီဂျပိုးနှင့် ဂေါ်ဖီ၊ ပန်းမုန်လာတွင်ကျရောက်သော စိန်ကွက်ဖလံများကို အမြစ်ပြတ် သုတ်သင်နိုင်သော ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးနှုန်းထားနည်းနည်းနှင့် ထိရောက်သဖြင့် တောင်သူများအတွက် အလွန်တွက်ချေကိုကသော ဆေးဖြစ်ပါသည်။
Read more about BIG GUN 30SC
Contact and Systemic inorganic foliar combined fungicide and bactericide with protective and curative action. Control of fungal and bacterial diseases affecting rice, vegetables and fruit. On rice, it controls diseases caused by Pyricularia oryzae and Pseudomonas glumae (bacterial grain rot), with ground and aerial applications, and seedling diseases caused by various bacterial pathogens. In sugar beet, it controls Cercospora beticola. Also used to control plant diseases in various crops: Pseudomonas syringae pv.
Read more about KUSIN 47